"ပြproblemနာအသုံးပြုသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားဖြင့်နောက်ကွယ်မှအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာများပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲခြင်းနှင့်မကိုက်ညီသောထိန်းချုပ်မှုများ" ၏သုံးသပ်ချက် (Prause et al ။ , 2015) - Your Brain On Porn
"porn စွဲနှင့်အတူကိုက်ညီမှုပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာများ Modulation" ၏ analysis (Prause et al ။ , 2015)
ဒီ EEG လေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်သော သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံသောကြောင့် နည်းသော vanilla porn ဖို့ဦးနှောက်ကို Activation ကြောင့်စာရင်းဖြစ်ပါတယ် supporting နာတာရှည် porn ကိုချသုံးကြောင်းအယူအဆလိင်စိတ်နိုးထထိန်းညှိ။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , ပိုမကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကိုအပြိုင်ဟို-hum porn (၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များအငြိမ်ပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ပျင်းခဲ့သည် Kuhn & Gallinat ။ , 2014) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်, စွဲလမ်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုသည်းခံစိတ်တွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ သည်းခံစိတ်ထပ်ခါတလဲလဲသုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်သောမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့လျော့နည်းသွားတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
peer- ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများ YBOP ၏အကဲဖြတ်မှုကိုသဘောတူသည် Prause et al ။, 2015 (←လင့်များ addressing ကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း Prause et al.)
မကြာခဏ porn သုံးစွဲသူများခဲရေးသားသူထိန်းချုပ်မှုထက်နိမ့် EEG ဖတ်ခဲ့သောကြောင့် နီကိုးလ် Prause သူမ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုမှားယွင်းစေသည်ဟုဆိုသည် Prause ကသူမ၏ EEG ဖတ်ချက်များသည် cue-reactivity ကိုအကဲဖြတ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် (ာင်း) အစားလေ့။ Prause မှန်တယ်ဆိုရင်တောင်သူမကသူမရဲ့ "အတု" အခိုင်အမာရှိကွက်လပ်ကိုလျစ်လျူရှုထားပါတယ် သော်လည်း Prause et al ။ 2015 မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လျော့နည်း cue-reactivity ကိုတွေ့ရှိခဲ့ဖူး, 27 သည်အခြားအာရုံကြောလေ့လာမှုများ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် cue-reactivity ကိုသို့မဟုတ်မတရားသော (ထိခိုက်လွယ်) သတင်းပေးပို့ကြပြီ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27. သိပ္ပံပညာသည်ကြီးလေးသောနည်းစနစ်ဆိုင်ရာအားနည်းချက်များကြောင့်အတားအဆီးဖြစ်စေသည့်တစ်ခုတည်းသောပုံမှန်မဟုတ်သောလေ့လာမှုနှင့်အတူမသွားပါ။ (သင်မဟုတ်လျှင်) သိပ္ပံသည်သက်သေအထောက်အထား၏ကြွယ်ဝမှုနှင့်အတူတတ်၏ အစီအစဉ်-မောင်းနှင်).
အပ်ဒိတ်: ဒီ 2018 တင်ဆက်မှုအတွက်ဂယ်ရီ Wilson ကနှစ်ခုနီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုများ (အပါအဝင်5မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများ, နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျသံမဏိ et al ။, 2013 နှင့် Prause et al။ , 2015): porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
Hyperbole & တိတောင်းဆိုမှုများ
ကဇူလိုင်လ 2015 ထုတ်ဝေခဲ့သကဲ့သို့, ငါတို့ကဲ့သို့ဤစာတမ်းတွင်ရည်ညွှန်းပါလိမ့်မယ် Prause et al ။, 2015. ဦး ဆောင်သူရေးသားသူရဲ့ခြဲ့ကားပြောဆိုမှုကနေစကြရအောင်။ နီကိုးလ် Prause သူမ၏ SPAN ဓာတ်ခွဲခန်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဤတစ်ကိုယ်တည်းလေ့လာမှုသည်“ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုငြင်းဆန်ခြင်း” ဖြစ်သည်ဟုရဲရင့်စွာပြောဆိုခဲ့သည်။
တရားဝင်အဘယ်အရာကိုသုတေသီ အစဉ်အဆက်တစ်ခု debunked ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်မယ်လို့ သုတေသနတစ်ခုလုံးကိုလယ်ပြင် နှင့်ကိုချေပရန်အတွက် အားလုံးယခင်လေ့လာမှုများ တစ်ခုတည်း EEG လေ့လာမှုနှင့်အတူ?
ထို့အပြင်နီကိုးလ်ပရပ်စ်ကသူမ၏လေ့လာမှုတွင်ဘာသာရပ် ၁၂၂ ခုပါ ၀ င်သည်။ အဖြစ်မှန်တွင်လေ့လာမှုတွင်“ လိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းအားပြproblemsနာများကြုံတွေ့နေရသော” ၅၅ ယောက်သာရှိသည်။ ဘာသာရပ်များကို Mormon 122% ကျော်သော Pocatello Idaho မှစုဆောင်းခဲ့သည်။ ကျန်တဲ့ ၆၇ ယောက်ကတော့ထိန်းချုပ်မှုတွေပါ။
တစ်စက္ကန့်သံသယရှိပြောဆိုချက်ကိုခုနှစ်, Prause et al ။ , 2015 ဟာစိတ္တဇနှစ်ဦးစလုံးနှင့်လေ့လာမှု၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ဖော်ပြထား:
"ဤရွေ့ကား Visual လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုစည်းမျဉ်းပြဿနာများကိုသတင်းပို့ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ပထမအလုပ်လုပ်တဲ့ဇီဝကမ္မဒေတာတွေဟာ"။
ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (2014) - ထက်ပိုမိုကြီးမားသောထည့်သွင်းစဉ်းစားရနိုင် Prause et al ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဘာသာရပ် ၆၄ ခုရှိခဲ့ပြီး၊ ဆေးစွဲခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများစတဲ့ဖယ်ထုတ်ခြင်းပစ္စည်းများအတွက်သေချာစွာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Prause လေ့လာမှု ၃ ခုကဒီလိုမလုပ်ခဲ့ဘူး။
Prause et al။ , 2015 Assessment ဦးနှောက်လှိုင်းလှုပ်ရှားမှု
Prause et al ။ , 2015 တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် electroencephalography သို့မဟုတ် EEG လေ့လာမှု။ EEG ၏ ဦး ခေါင်းသည်လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု (သို့) ဦး နှောက်လှိုင်းများကိုတိုင်းတာသည်။ EEG နည်းပညာသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးရှိခဲ့သော်လည်း ဦး နှောက်လှိုင်းများကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းများ၊ သို့မဟုတ်မည်သည့်တိကျသော EEG ဖတ်ရှုချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများဆက်လက်ရှိနေသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်စမ်းသပ်ရလဒ်များကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုရှိ spikes များကို amplitude (အောက်တွင်) ဟုခေါ်သည်။
သုတေသီများအခြို့သော EEG amplitude (LPP, P3) ထိုယုံကြည် နိုင် ထိုကဲ့သို့သောပုံအဖြစ်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှပေးထားသောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , သာ. ကြီးမြတ် amplitude ဘာသာရပ်စမ်းသပ်မှုအတွက်တင်ဆက်သည့်အမြင်အာရုံနှိုးဆွဖို့ သာ. ကြီးသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ Prause လေ့လာမှုအတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွနေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှတစ်စက္ကန့်ထိတွေ့မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်အရေးကြီးသောအချက်များ:
လူတစ်ဦးလိင်နှိုးဆွခဲ့ပါတယ်လျှင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘက်မှပြန်လည်တွန်းလှန်ခဲ့ကြပါလျှင်အာရုံကို သာ. ကြီးမြတ်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ EEG ဆူး, ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြလို့မရပါဘူး။ တစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့ဆူးနည်းတူအလွယ်တကူကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စေခြင်းငှါ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုထိုကဲ့သို့သောရွံရှာသို့မဟုတ်ထိတ်လန့်အဖြစ်။
ဦး နှောက်၏ဆုချီးမြှင့်မှု circuit ကိုအသက်သွင်းထားခြင်းရှိမရှိ EEG spike ကမပြောနိုင်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအပေါ်အခြားမကြာသေးမီလေ့လာမှုများအားဖြင့် Voon et al။ , 2014 ။ နှင့် Kuhn & Gallinat 2014 ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆုလာဘ် circuit ကိုလှုပ်ရှားမှုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ fMRI စကင်နာများအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှု၌, Prause et al ။၂၀၁၅ တွင်“ အပြာစွဲသူများ” ဟုခေါ်သည့် EEG လှုပ်ရှားမှုကို (တစ်ပတ်လျှင်ပျမ်းမျှ ၃.၈ နာရီ) သည်ထိန်းချုပ်မှု (အပတ်စဉ် ၀.၆ နာရီ ၀.၆ နာရီ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာဓါတ်ပုံများကြည့်ရှုသည့်အခါ“ စွဲလမ်းသူ” နှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုလုံးသည် EEG လှုပ်ရှားမှု (LPP amplitude) ရှိသည်။ သို့သော် thအီးလွှဲခွင်ခဲ့သည် အဆိုပါအဘို့အသေးငယ် "porn စွဲ။ "
Prause et al။ , 2015 တကယ်တော့ Porn စွဲထောက်ပံ့
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲသူများ” အတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့်ပမာဏကိုမျှော်လင့်လျက်၊
သို့သော်ယင်းသည်အမှန်ပင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသလော။ သုတေသနပြုသူမိတ်ဆွေတစ် ဦး ပြောသကဲ့သို့မည်သည့်လေ့လာမှုမဆိုတွင်ရလဒ်များရှိသည်။ သုတေသီ၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူချက်များရှိသည်။ ရလဒ်ကတော့ရှင်းပါတယ်။ Porn စွဲသူများသည် vanilla sex ဓါတ်ပုံများကိုတစ်စက္ကန့်တွင်ရိုက်မိခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်မှုနည်းပါးသည်။ ဒီနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုသောက်သုံးသူမည်သူမဆိုအတွက်မအံ့သြသင့်ပါ။
ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Prause ၏“ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ” အတွက် LPP ၏အနိမ့်ဆုံး LPP ပမာဏကိုသူမက“ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်” ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ သူမရဲ့တွေ့ရှိချက်နှစ်ခုလုံးဖော်ပြသည် desensitization (သို့မဟုတ်လေ့) နှင့် သာ. ကြီးမြတ်ဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်သောသည်းခံစိတ်။ နှစ်ဦးစလုံးအများအားစွဲတွင်တွေ့မြင်နေကြလျှင်, အတန်ငယ်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တိုးလည်းရှိနသောသူမိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများသည်တှငျမှတျတမျးတငျထားသပြီ မဟုတ် (အသေးစိတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) စွဲ။
Key ကိုအမှတ်: porn အသုံးပြုမှုရှိခဲ့ပါလျှင် အဘယ်သူမျှမ Prause ၏ဘာသာရပ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်“ စွဲလမ်းသောစွဲစွဲသူများ” ၌ရှိသည်ဟုမျှော်လင့်လိမ့်မည် တူညီတဲ့ LPP လွှဲခွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများတုံ့ပြန်။ ယင်းအစား Prause ၏“ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ” ဟုခေါ်သည့် vanilla porn ရုပ်ပုံများကို ဦး နှောက်ကိုအနိမ့်ဆုံး (LPP နိမ့်ကျ) နည်းသည်။ ငါမျက်တောင်ခတ်အမှတ်အသားများကိုသုံးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Prause ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစွဲသူတွေအတွက်စိစစ်ရေးကိရိယာကိုတကယ်တမ်းအသုံးမပြုခဲ့လို့ပါ။ ဒါကြောင့်သူမရဲ့အချို့အကြောင်းအရာတွေဟာညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းသူတွေဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့ကျနော်တို့မသိပါဘူး။ Prause ၏မှားယွင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာခေါင်းစဉ်များတရားဝင်ဖြစ်ရန် အားလုံး Prause ၏အကြောင်းအရာ ၅၅ ခုသည်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများဖြစ်ရန်လိုလိမ့်မည်။ မဟုတ်အချို့သောမဟုတ်ဘဲအများဆုံး, ဒါပေမယ့် တိုင်းတစ်ခုတည်းဘာသာရပ်။ အားလုံးအရိပ်လက္ခဏာဟာ 55 Prause ဘာသာရပ်များကောင်းတစ်ခုအရေအတွက်က Non-စွဲဖြစ်ခြင်းထောက်ပြ
Pocatello Idaho မှအွန်လိုင်းကြော်ငြာများမှတဆင့်ဘာသာရပ်များကို“ လူ” များကိုတောင်းခံခဲ့သည်။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိကြုံနေရပြဿနာများ"။ Pocatello အိုင်ဒါဟို 50 ကျော်% Mormonism ဖြစ်ပါသည်, ထိုဘာသာရပ်များ၏ဤမျှလောက်များစွာသော porn အသုံးပြုမှုကိုမဆိုငွေပမာဏကိုတစ်ဦးလေးလေးနက်နက်ပြဿနာကြောင်းခံစားရပေမည်။ လေးနက်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်မှာဘာသာရပ်များအဘယ်သူအားမျှ porn စွဲအဘို့အပြခံခဲ့ရသည်။ ပြဿနာသူသင်တန်းသားများသည်အခြားအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်, ကြော်ငြာကန့်သတ်စုဆောင်းမှုအတွက် သာ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ" ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူအများစုသည် streaming video clips များကိုကြည့်ရှုကြသဖြင့်၊
သင်၏ "ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ" သည်များသောအားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများမဟုတ်လျှင်သင်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုမည်သို့ဖယ်ထုတ်နိုင်မည်နည်း။ သင်မဖြစ်နိုင်ဘူး
အဆိုပါ Prause et al ။ အတူဿုံ align ရှာတွေ့ Kühn & Gallinat (2014), ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုမိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများသည်အတွက်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသော (ခဲ့ကြသည်တဲ့သူ မရစွဲ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများ (.530 စက္ကန့်) နှင့်ထိတွေ့သည့်အခါ။ သုတေသီ said:
နောက်ထပ် EEG လေ့လာမှု အမျိုးသမီးတွေအတွက် သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှု porn မှလျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာထားပါ, ပို porn ကိုသုံးပါတဲ့သူတွေကိုပိုမိုပေါ့ပါးစားသုံးသူများ၌တွေ့မြင်တုံ့ပြန်မှုအဆင့်ကိုပိုမိုနှိုးဆွလိုအပ်ပါတယ်စေခြင်းငှါ, vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုအားလုံးကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖို့အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒီထက်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းအာရုံစိုက်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း EEG ဖတ်မှနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ဇာတ်လမ်း၏အဆုံး။
Prause et al။ , 2015 ဒါက Concedes Kühn & Gallinat 2014 ညာ Be နိုင်ပါစေ
အဆိုပါဆွေးနွေးမှုအပိုင်းမှာတော့ Prause et al, ကိုးကား Kühn & Gallinat နိမ့် LPP ပုံစံများအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်အဖြစ်ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သူမသည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်ရောက်နေပြီးသူမ၏အဓိပ္ပါယ်သည်အလွန်ဆိုးဝါးလွန်းပြီးသူမ၏ဒေတာမှအလှည့်အပြောင်းကိုယူခဲ့သည်။ porn စွဲလမ်းမှုအပေါ် Prause ၏ပြင်းထန်သောဘက်လိုက်မှုသည်သူမ၏အဓိပ္ပါယ်ကောက်ချက်များကိုပုံသွင်းပေးခဲ့သည်။ သူမ ဟောင်းတဦး တွစ်တာဆောင်ပုဒ် သူမသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနများအတွက်လိုအပ်သောဘက်မလိုက်မှုကင်းမဲ့စေခြင်းငှါအကြံပြု:
စကားမစပ်, Kühnနှင့် Prause နှစ် ဦး စလုံးအသုံးပြုသောရုပ်ပုံများသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သော ၉ စက္ကန့်ဖြစ်သော“ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော” ဗီဒီယိုကလစ်များနှင့်များစွာကွာခြားသည် ကင်းဘရစ် fMRI လေ့လာမှုညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏တူညီမှုကိုတွေ့ရသည်။ သုတေသီများသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ပုံမှန်ဖြစ်သည့်ဗီဒီယိုကလစ်များအပေါ်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောဆုလာဘ်စင်တာ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းလေ့လာမှုများနှင့်၎င်းတို့၏အနက်ကိုညစ်ညမ်းပုံရိပ်များ (တစျခုခုသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများ) ကြည့်ရှုဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေကြသည် is အစားတစ်ခုတည်းကိုသာတစ်ဦး cue ထက်စွဲလမ်းအပြုအမူ။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, ဗော့ဒ်ကာပုလင်းများ၏ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှု is တစ် ဦး အရက်များအတွက် cue ။ ထို cue သည်ထိန်းချုပ်မှု၏ ဦး နှောက်ထက်သူမ၏ ဦး နှောက်ကိုပိုမိုလင်းစေနိုင်သော်လည်းအရက်သည်အလွန်စိတ်ကျေနပ်မှုရရန်အရက်များစွာလိုအပ်သည်။ Kühnနှင့် Prause လေ့လာမှုများမှအသည်းအသန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ဆူညံသံကိုပြသရန် ပို၍ လှုံ့ဆော်မှု (ဗီဒီယိုများ) လိုအပ်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့သည်ရုပ်ငြိမ်များကိုသာမတုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါ။ ဤသည်သည်းခံစိတ်၏သက်သေသာဓက (နှင့်နောက်ခံစွဲနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများ) ။
UCLA သည် Prause ၏စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိပါ။ သူမသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အစောပိုင်းကတည်းကမည်သည့်တက္ကသိုလ်နှင့်မှချိတ်ဆက်မှုမရှိခဲ့ပါ။
အောက်တိုဘာလ, 2015 အတွက် Prause ရဲ့မူလတွစ်တာအကောင့်ကိုအပြီးတိုင်နှောင့်ယှက်ဘို့ဆိုင်းငံ့ထား
သူမရဲ့အတွက် 2013 EEG လေ့လာ နှင့်တစ်ဦး ဘလော့ Post ကို Prause တိတ်နည်းဦးနှောက် Activation လေ့သို့မဟုတ်စွဲလမ်းညွှန်ပြပေးနိုင်မလားဒါက
Prause ကသူမ၏ ၂၀၁၃ EEG လေ့လာမှုသည်“ hypersexuals” ဟုခေါ်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် EEG ဖတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သောကြောင့် Prause က ၄ င်းသည်“ hypersexuals” ဟုတ်မဟုတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်သက်သက်သာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသည်။ သင့် ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက်ပိုမိုမြင့်မားသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်း EEG ဖတ်ရှိသည်:
ERP များကို hypersexuals တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး၊ စွဲလမ်းမှု (ပိုမို P300) နှင့် impulsivity (lower P300) တွင်စာပေများသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဟောကိန်းများကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် hypersexual အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ ဦး တည်ချက်ကိုအဓိကအားဖြင့်သီအိုရီအရဖော်ပြခဲ့သည်။ [ဒါကလုံးဝအခြေခံမရှိဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ]
As ဒီနေရာမှာရှင်းပြခဲ့ Prause ၏ ၂၀၁၃ EEG လေ့လာမှုတွင်ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့မရှိသဖြင့်“ စွဲလမ်းသူများ” ၏ EEG ဖတ်ရှုခြင်းကို“ စွဲလမ်းသူမဟုတ်သူများ” နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်သူမ၏ ၂၀၁၃ လေ့လာမှုကကျန်းမာသူတစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ “ hypersexuals” အတွက် EEG ဖတ်ခြင်းအကြောင်းကိုဘာမှမပြောပါဘူး။ ၂၀၁၃ မှ Prause ၏အမြင်များကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့။
2013 ခုနှစ်, Prause ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာညစ်ညမ်းစွဲ, ပြနိုင်သူကပြောပါတယ်:
သူမ၏ 2013 EEG လေ့လာမှုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ငါးလမတိုင်မီ Prause နှင့်ဒါဝိဒ် Ley ဒီရေးသားဖို့တက်ပူးပေါင်း စိတ်ပညာယနေ့တွင် blog post: သူမ၏လာမည့်လေ့လာမှုအကြောင်းကို။ အထဲတွင်သူတို့က "ဆိုကြသည်လျော့လျှပ်စစ်တုံ့ပြန်မှု"လေ့သို့မဟုတ် desensitization ညွှန်ပြလိမ့်မယ်:
သူတို့ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုအားပေးအဖြစ် EEG ရဲ့အဲဒီတစ်ဦးချင်းစီမှအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်သောအခါမူကား, ရလဒ်များကိုအံ့သြစရာ ရှိ. , မဟုတ်မှာအားလုံးလိင်စွဲသီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီ။ အမှန်တကယ် habituating (သို့မဟုတ် desensitizing) ခံခဲ့ရသည်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုပါလျှင်မူးယစ်ဆေးများမှာကဲ့သို့, ထို့နောက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုဦးနှောက်ထဲမှာမှိန်ဖျော့လျှပ်စစ်တုံ့ပြန်မှုရှိသည်မယ်လို့။ တကယ်တော့ဒီရလဒ်တွေအတွက်, ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့သည်။ ယင်းအစားပါဝင်သူများ၏ယေဘုယျအားဖြင့်သာမန်လူတို့၏ ဦး နှောက်များကဲ့သို့သောသူတို့၏ပြသထားသောရုပ်ပုံများကိုလျှပ်စစ် ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုတိုးတက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ 2013 Prause ဟုပါပြီ "လျော့နည်းသွားလျှပ်စစ်တုံ့ပြန်မှု" လေ့သို့မဟုတ် desensitization ညွှန်ပြလိမ့်မယ်။ သို့သျောယခု 2015 အခါ Prause အတွက် desensitization ၏သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိရ (စွဲအတွက်ဘုံ), သူမကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနေသည် "လျော့နည်းသွားလျှပ်စစ်တုံ့ပြန်မှု" porn စွဲ debunks ။ ဟမ်?
ဒါကြောင့်တစ်ဦးအမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူသူမ၏အတူတူပင်ပန်းဘာသာရပ် data တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ Prause ယူ. ကွားနှစ်နှစ်မှာတော့သူမပြည့်စုံလှန်လာသောသေတ္တာပြုတော်မူပြီ။ အခုတော့သူမကထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုကဆက်ပြောသည်သည့်အခါသူမတွေ့ရှိရကြောင်း desensitization ၏သက်သေအထောက်အထားအခိုင်အမာ မဖြစ် စွဲ၏အထောက်အထား (သူမက 2013 ခုနှစ်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူမပြောဆိုထားသည်) ။ ၎င်းအစားသူမသည်သူမအားစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းဆန်ကြောင်းထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲသိပ္ပံပညာနှင့်မကိုက်ညီ။ တွေ့ရှိချက်များကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိဘဲသူမသည်“ မှားယွင်းသောစွဲလမ်းမှု” ရှိသည်ဟုဆိုလိမ့်မည် တကယ်တော့ ၂၀၁၅ Prause က ၂၀၁၃ Prause လေ့လာမှုနှင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုလက်မခံလျှင်သူမမှာ“စွဲဒဏ်ဍာရီမြွက်။ "
စကားမစပ်အထက်ပါကောက်နှုတ်ချက် -“ ပါဝင်သူများ၏ခြုံငုံဖော်ပြချက်သည်အီရတ်ပုံရိပ်ကိုလျှပ်စစ် ဦး နှောက်တုန့်ပြန်မှုတိုးတက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်” ရှုပ်ထွေးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကြားနေရှုခင်းပုံထက်လိင်ဆိုင်ရာပုံများကိုပိုမိုတုံ့ပြန်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ Prause ၏ ၂၀၁၃ လေ့လာမှုတွင်ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့မရှိသဖြင့်ညစ်ညမ်းစွဲသူများ၏ EEG ဖတ်ရှုခြင်းကိုစွဲလမ်းသူမဟုတ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိပါ သူမထိန်းချုပ်အုပ်စုကိုထည့်သွင်းလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွသည့်ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်မှုသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီအစားသူမရဲ့လက်အောက်ငယ်သားများခံစားနေရပြီးထွက်လာသည် desensitizationတစ်ခုစွဲဖြစ်စဉ်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Prause ၏ ၂၀၁၃ ရလဒ်သည်အဓိပ္ပာယ်မရှိ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ)၊ သူ၏ ၂၀၁၅ ခေါင်းစီးများသည်သူမယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အရာများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ သူမသည်သက်သေအထောက်အထားရှာဖွေတွေ့ရှိနေစဉ်စွဲငြင်းဆန်ဖို့ဆိုပါတယ်။
1) နှင့်ဝသကဲ့သို့ Prause ၏ ၂၀၁၃ EEG လေ့လာမှု (သံမဏိ et al.), ဒီလေ့လာမှုမှာဘာသာရပ်များယောက်ျား, မိန်းမနှင့်ဖြစ်နိုင်သည် "Non-heterosexuals" ဖြစ်ကြသည်။ သက်သေအထောက်အထားများအားလုံးအရ Prause သည်သူမ၏လက်ရှိလေ့လာမှုနှင့်သူမ၏ ၂၀၁၃ လေ့လာမှုအတွက်တူညီသောဘာသာရပ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးအရေအတွက်သည်တူညီကြသည် (၁၃) နှင့်စုစုပေါင်းအရေအတွက်သည်အလွန်နီးကပ်သည် (၅၂ နှင့် ၅၅) ။ ရှိလျှင်, ဒီလက်ရှိလေ့လာမှု (၇) လိင်ကွဲလိင်ကွဲသူ (၇) ယောက်ပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်သုတေသီများကို select သောစွဲလေ့လာမှုများ, များအတွက်စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းချိုးဖောက်နေသောကြောင့်ဤအရေးပါ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း အသက်၊ ကျား၊ မ၊ တိမ်းညွတ်မှုနှင့်ဆင်တူသောအိုင်ကျူ (IQ) အရဘာသာရပ်များ (ပိုပြီး ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်ယွင်းရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်) ။ ဒါဟာသုတေသနအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင် (လေ့လာရေးမှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိသည်အတည်ပြုအဖြစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှ arousal တိုင်းတာသောဤတစျခုကဲ့သို့လေ့လာမှုများအဘို့အထူးသဖြင့်အရေးပါသည်: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) ။ ဒီအားနည်းချက်တစ်ခုတည်းက Prause ရဲ့လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးကိုမေးခွန်းထုတ်သည်။
2) Prause ၏ဘာသာရပ်များကိုကြိုတင်မစစ်ဆေးထားပါ။ ခိုင်လုံသောစွဲ ဦး နှောက်လေ့လာမှုများသည်ယခင်ကအခြေအနေများ (စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ OCD၊ အခြားစွဲလမ်းမှုများ) ရှိသူများကိုစစ်ဆေးသည်။ ဤသည်တာ ၀ န်ရှိသောသုတေသီများသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောက်ချက်ဆွဲနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ ကင်းဘရစ် Univeristy လေ့လာမှုများ သင့်လျော်သောစိစစ် & နည်းစနစ်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
3) EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးတွင်“ porn စွဲ” မှုကိုအကဲဖြတ်ရန် Prause သည်မေးခွန်းနှစ်ခုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှု / စွဲလမ်းမှုအတွက်စစ်ဆေးရန်အတွက်အတည်မပြုပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုစကေး (SCS) ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေအကဲဖြတ်မှုကိုကူညီရာတွင်လိင်အပြုအမူကိုတိုင်းတာရန်ဖန်တီးခဲ့သည်။ မဟုတ် အမျိုးသမီးများအတွက်အတည်ပြု။ အဆိုပါ SCS ပြောပါတယ်:
အဆိုပါ SCS, ဒုတိယမေးခွန်းလွှာ (ကဲ့သို့ပင်အဆိုပါ CBSOB) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမရှိပါ။ ၎င်းသည် "hypersexual" ဘာသာရပ်များနှင့်၊ ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်စစ်ဆေးရန်အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောပစ္စည်းများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမဟုတ်ပါ။
ခိုင်လုံသောစွဲ "ဦး နှောက်လေ့လာမှု":
Prause, သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ခံချက်အသုံးပြုပုံ porn စွဲများ၏ concept ကိုပယ်ချခြင်း, porn အသုံးပြုမှုကိုပြဿနာဖြစ်စေဘယ်တော့မှမနိုင်မယုံကြည်သည်။ ဥပမာအားအဘို့ဤမကြာသေးမီကနေကိုးကား မာတင် Daubney ဆောင်းပါး လိင် / ညစ်ညမ်းစှဲမှာ about:
ထိုသို့သောမွေးရာပါဘက်လိုက်မှုသူမ၏စမ်းသပ်ဒေတာနှင့်အတူ align မထားတဲ့ Prause နေဖြင့်အများအပြားတောင်းဆိုမှုများမှဦးဆောင်ကြလိမ့်မည်။
ပထမဆုံးနမူနာကတော့သူမ 2013 လေ့လာမှု“လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, မ hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ရူးနှမ်း neurophysiological တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ " ဒီလေ့လာမှုကိုမထုတ်ဝေခင်ငါးလအလိုမှာ Prause ကစိတ်ပညာရှင်ကိုထုတ်ပေးတာပါ ဒါဝိဒ်သည် Leyချက်ချင်းအကြောင်းပေါ် blogged သူကို စိတ်ပညာယနေ့ ဒါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုမရှိဘူးဆိုတာသက်သေပြဖို့ဖြစ်တယ်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အခါဤကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများကိုလေ့လာမှုမှအထောက်အပံ့မပေးခဲ့ပါ။ အောက်ပါကောက်နှုတ်ချက်ကိုဤမှယူသည် သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု လေ့လာမှု:
'' ဒီတစ်ခုတည်းကစာရင်းအင်းသိသိသာသာတွေ့ရှိချက်စွဲအကြောင်းကိုဘာမျှကပြောပါတယ်။ ထို့အပွငျ, ဒီသိသာတွေ့ရှိချက်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အနုတ် P300 လွှဲခွင်နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းညွှန်ပြ P0.33 နှင့် (r = -300) တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒအကြားဆက်စပ်မှု, အနိမ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ဒီကိုတိုက်ရိုက်အဖြစ် P300 ၏အနက်ကိုဆန့်ကျင် မြင့်သော အလိုဆန္ဒ။ အခြားအစှဲလမျးသူအုပ်စုများမှမနှိုင်းယှဉ်ရှိပါတယ်။ အုပ်စုများကိုထိန်းချုပ်ရန်မနှိုင်းယှဉ်ရှိပါတယ်။ သုတေသီများကရေးဆွဲအဆိုပါကောက်ချက်ဒုက္ခလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိသတင်းပို့သူတွေကိုရှိသည်သို့မဟုတ်ကင်းသို့မဟုတ်စွဲတခြားမျိုးအလားတူဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမပြောပါသောအချက်အလက်များ, ကနေကွမ်တမ်ခုန်ဖြစ်ကြသည်။ ''
လက်ရှိ EEG လေ့လာမှုအရ Prause သည်သူမဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်သည်အခြားစွဲလမ်းသူများကဲ့သို့တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိဟုပြောဆိုခဲ့သည် တကယ်တော့သူမမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုစဉ် EEG (P300) ပိုမိုမြင့်မားသောဖတ်ခြင်းများရှိသည်။ အောက်မှာမှတ်ချက်ပေး စိတ်ပညာယနေ့တွင် အင်တာဗျူး Prause ရဲ့ပြောဆိုချက်အရ ဂုဏ်ထူးဆောင်ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင်ကပြောကြားခဲ့သည်အကြီးတန်းစိတ်ပညာပါမောက္ခ:
ဤ ယင်းမှ neuroscience စာပေ၏ 2015 ပြန်လည်သုံးသပ် ညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်ထပ်မံသို့ သွား.
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ images နဲ့ hypersexuality နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏မေးခွန်းလွှာအစီအမံကြည့်ရှုသည့်အခါအဆိုပါလေ့လာမှု ERP amplitude အကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာ [hypersexuality မေးခွန်းအပေါ်ရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှု၏မရှိခြင်းနိဂုံးချုပ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုသည့်အခါ "ရောဂါဗေဒ hypersexuality ၏မော်ဒယ်များအထောက်အပံ့ပေးရန်ပျက်ကွက်" P300 amplitude ကိုဆိုလိုတာ303] (စ။ 10) ။ သို့သော်ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းပိုကောင်းနည်းစနစ်အတွက်ပွဲတစ်ပွဲအားနည်းချက်တွေကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, ဒီလေ့လာမှုတစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဘာသာရပ်ရေကူးကန် (7 Non-လိင်ကွဲအပါအဝင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း,) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှစွဲ၏ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ် Cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများတရားဝင်ရလဒ်များကိုရှိသည်ဖို့တသားတည်းဘာသာရပ်များ (အတူတူလိင်, အလားတူအသက်အရွယ်) လိုအပ်သည်။ porn စွဲလေ့လာမှုများမှတိကျသောကြောင့်ကောင်းစွာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း [ဆင်တူအမြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှဦးနှောက်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ကွာခြားမြဲမြံစွာတည်င့်304, 305, 306] ။ ထို့အပြင်အဆိုပါစိစစ်မေးခွန်းနှစ်ခုစွဲ IP ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အတည်ပြုကြပြီမဟုတ်, နှင့်ဘာသာရပ်များစွဲသို့မဟုတ်စိတ်ဓါတ်များမမှန်၏အခြားသရုပ်များအတွက်ပြမခံခဲ့ရပါ။
"ထို့ကြောင့်, လက်ရှိ CSB လေ့လာမှုအတွက် dACC လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုလုံးနှင့်ယခင် CSB လေ့လာမှုမှာအစီရင်ခံ P300 လှုပ်ရှားမှု  အာရုံကိုဖမ်းအလားတူနောက်ခံဖြစ်စဉ်များကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ အလားတူပင်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများတိုးမြှင်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူဤအအစီအမံများအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှုကိုပြ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ dACC လှုပ်ရှားမှုတဏှာ၏အညွှန်းကိန်းကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအရာ, အလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်, ဒါပေမယ့်စွဲလမ်းတစ်ခုမက်လုံးပေး-salience မော်ဒယ်ပေါ်ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များ like နှိပ်နှင့်အတူမပတျသကျဘူးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ” (စ။ ၇)
အောက်ဆုံးလိုင်း: ရှစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူသဘောတူ သံမဏိ et al။ , 2013 (၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013က) အမှန်တကယ်ကဖော်ပြခဲ့သည် 2013 EEG လေ့လာမှု ပိုမိုမြင့်မားသော EEG ဖတ်ဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ (P300) ။ စွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးကပိုမိုမြင့်မား P300 တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ (ဒီလက်ရှိလေ့လာမှုအထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့အဖြစ်ရိုးရှင်းစွာ 2013 လေ့လာမှုတစ်ခုထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုတွေ့ရှိခဲ့) သို့သော်လေ့လာမှုတွေ့ရှိချက် uninterpretable ဖန်ဆင်းသောနှိုင်းယှဉ်မှု, အဘို့အဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှု correlating porn အဘို့ သာ. ကြီးမြတ် cue-reactivity ကိုအစီရင်ခံတင်ပြ နည်းသော ပူးပေါင်းလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒ။ ရိုးရှင်းစွာထားပါ: အဆိုပါလေ့လာမှု porn နှင့်လိင်များအတွက်လျော့နည်းအလိုဆန္ဒ (သို့သော်မပေးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့လျော့နည်းအလိုဆန္ဒ) ကို သာ. ကြီးမြတ်ဦးနှောက်ကို Activation တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မဟုတ်အတိအကျဘာခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ရိုးရှင်းစွာပိုမိုမြင့်မားလိင်စိတ်ရှိခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်လိင်စွဲတိုးပွားလာ porn အကြောင်းကိုပြောဆိုထားသည်။
Prause ၏လက်ရှိလေ့လာမှုကဲ့သို့ပင် ၂၀၁၃ မှသူမ၏ဒုတိယလေ့လာမှုသည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်“ စွဲလမ်းသူများ” အကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော် (2013) မှသူတို့ရဲ့စိတျလှုပျရှားမှုအစီရင်ခံ "Hypersexuals" တွင် Emotion Dysregulation ၏အထောက်အထားမျှမ။ " ရှင်းပြထားသည် ဒီဝေဖန်မှုအတွက်, ခေါင်းစဉ်အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်ဖုံးကွယ်။ တကယ်တော့ "စွဲလမ်း" ရှိခဲ့ပါတယ် နည်းသော ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု။ ဤသည်အများအပြားအဖြစ်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး porn စွဲထုံခံစားချက်တွေကိုသတင်းပို့ နှင့်စိတ်ခံစားမှု။ Prause ကသူမကို“ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပိုမိုတုံ့ပြန်မှု” မျှော်လင့်ကြောင်းပြောခြင်းအားဖြင့်ခေါင်းစဉ်ကိုအပြစ်တင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ပိုမိုတိကျသောခေါင်းစဉ်မှာ -အခက်အခဲဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်သူဘာသာရပ်များ, ဖြစ်ကောင်းကြောင့်လေ့ရန်, စွဲလမ်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်မှလျော့နည်းစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုကိုပြသ“ ဤတွေ့ရှိချက်သည် Prause ၏လက်ရှိ EEG လေ့လာမှုနှင့်ကိုက်ညီသည် Kühn & Gallinat (၂၀၁၄)နှင့် desensitization ဖော်ပြသည်။
Prause ရဲ့ ၂၀၁၅ စာတမ်းမှာ“ကြည့်ရှုခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်နှင့်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုမဟုတ်ဘဲ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအခြေခံလေ့လာမှုများတွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များကြောင့်စက္ကူ၏တောင်းဆိုချက်များကိုမည်သည့်အထောက်အထားမျှမတွေ့ရပါ။ ဝေဖန်မှုနှစ်ခုသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်နှင့်တစ် ဦး ကိုမူဆရာဝန်တစ် ဦး မှဝေဖန်သုံးသပ်ချက်နှစ်ခုသည်ကွဲပြားခြားနားချက်များနှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်စွပ်စွဲချက်များစာတမ်းများကိုဖော်ပြသည်။
ရစ်ချတ်အေ Isenberg MD (2015) က peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်
သံသယဖြစ်ဖွယ်လေ့လာမှုတွင်မည်သည့်အရာမျှတက်တက်ကြွကြွ: လူငယ်ဘာသာရပ်များ၏ ED ကိုရှင်းပြရန်မလွယ်ကူခဲ့ - Gabe Deem (2015)
အထက်ပါလေ့လာဆန်းစစ်ချက်များအရ Prause သည်လိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ညစ်ညမ်းတဲ့သူတွေကလိင်ဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့တယ်။ တစ်ပတ်လျှင် ၂ နာရီထက်ပိုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူတို့သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ပြီးနောက်ရမှတ်များပိုမိုများပြားသည်။ ဒါကမျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်အရာဖြစ်တယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အား porn မပါဘဲလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအကြောင်း၊ ထိုသို့ erectile function ကိုအကြောင်းကိုဘာမျှမကပြောပါတယ်။ Prause သည်သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမထုတ်ပြန်သောကြောင့်ခေါင်းစဉ်သည်မည်သည်ကိုပြောရန်ခဲယဉ်းသော်လည်းတိကျသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းကအမျိုးသားများကိုပိုမိုခွန်အားဖြစ်စေသည်။ "
ပို၍ အံ့ ising စရာကောင်းသည်မှာသူမ၏စက္ကူမှလူငယ်များ (ပျမ်းမျှအသက် ၂၃ နှစ်) အတွက်ရမှတ်များသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုညွှန်ပြသည်။ ဒီလူငယ်တွေမှာဘာကြောင့် ED ရှိရတာလဲဆိုတာကိုကျမတို့မသိဘူး။အတော်လေးကောင်းသော erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာကဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဒီစာရွက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါ်နှင့်သွားနိုင်ဘူး။
2014 ခုနှစ်တွင် Prause ၏စာရေးဆရာ David Ley နှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပူးပေါင်းခဲ့သည် လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား, သူသည်စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်သုသေသနအာရုံကြောသိပ္ပံတွင်နောက်ခံမရှိသော - စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ဖွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် -ဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထား: အ "babyish စွဲ" မော်ဒယ်တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ " ဤအင်တာနက်သုံးသပ်ချက်သည်စာရေးသူသည်“ အင်တာနက်သည်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကိုပိုမိုကြည့်ရှုခြင်းမရှိသေးပေ” ဟူသောအံ့ propos ဖွယ်အဆိုပြုချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤဝေဒနာပြင်းထန်သောအသေးစိတ်ဝေဖန်မှုကဖော်ပြသည့်အတိုင်း Ley & Prause ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုလုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အမျှတစ်ဦးကအရိုးကျိုးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် pose: အဆိုပါဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထားသည်။"
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ယခင်နီကိုးလ်ပရာ့စ်၌ပညာသင်ကြားမှုရှိကြောင်းဖော်ပြရန်လိုအပ်သည် ရှည်လျားသောသမိုင်း အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပျက်ဆီးအထောက်အထားအစီရင်ခံရန်ဝံ့တဲ့သူစာရေးဆရာ, သုတေသီများ, ကုသ, သတင်းထောက်များကိုနှင့်အခြားသူများနှောင့်ယှက်၏။ သူမသည်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယား၏အဆိုအရ အ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved ပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။) ။ ဒါဟာအစ Prause ရှိစေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ FSC မှရရှိသောဘာသာရပ်များကိုသူမတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုဖြစ်ခြင်း FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး) .Prause ကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများ အကွောငျး သူမ၏လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို နှင့်သူမ၏ လေ့လာမှုရဲ့နည်းစနစ်။ ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတွေ့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
အနှစ်ချုပ်မှာတော့ Porn အသုံးပြုသူများအပေါ်သုံး Prause လေ့လာရေးအတွက်အတူညှိရန် ကင်းဘရစ်လေ့လာမှုများ နှင့် Kühn & Gallinat (၂၀၁၄) ။
1) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများ (2013) ကရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်
ယင်းနှင့်အတူ Aligns 23 သည်အခြားအာရုံကြောလေ့လာမှုများ porn သို့မဟုတ်မတရားသော (ထိခိုက်လွယ်) မှ cue-reactivity ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲပေါ်မှာ။ ထို့အပြင် Prause လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည် နည်းသော အတူ correlating မိတ်ဖက်များအတွက်လိင်ကိစ္စအလိုဆန္ဒ ကြီးမားသောr ကို cue-reactivity ကို။ တစ်ဦးအပြိုင်တွေ့ရှိချက်များတွင်ပထမဦးဆုံးကင်းဘရစ်လေ့လာမှုဘာသာရပ်၏ 60% အခက်အခဲအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူစိုက်ထူ / arousal ရရှိခဲ့သေး porn နှင့်အတူစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
2) တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော် (2013) မှသူတို့ရဲ့စိတျလှုပျရှားမှုအစီရင်ခံ "Hypersexuals" တွင် Emotion Dysregulation ၏အထောက်အထားမျှမ
အတူ Aligns Kühn & Gallinat (၂၀၁၄) ပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများတုံ့ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation မှဆက်နွယ်နေကြောင်း။ လူတို့နှင့်လည်း aligns စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုသူများအပေါ်မှာ။
3) ပြImagesနာရှိသောသုံးစွဲသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အလားအလာများ“ Porn စွဲ” နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများ (၂၀၁၅)
အတူ Aligns Kühn & Gallinat (၂၀၁၄) ပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများတုံ့ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation မှဆက်နွယ်နေကြောင်း။
(ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) အနိမ့် EEG amplitude လေ့သို့မဟုတ် desensitization ညွှန်ပြမယ်လို့ဆိုပါတယ်သောသူ 2013 Prause နှင့်အတူဿုံ Aligns ။
လိင်ဗေဒပညာရှင်များ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များသို့မဟုတ်အသံကိုက်ခြင်းများမပြုလုပ်မီစာနယ်ဇင်းသမားများနှင့်ဘလော့ဂါများသည်လေ့လာမှုများကိုအမှန်တကယ်ဖတ်ပြီးစွဲနေသည့်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဆွေးနွေးလျှင်ကောင်းမည်မဟုတ်လော။ အဓိကအချက် - အားလုံး ဦးနှောက်နှင့် neuropsychological လေ့လာမှုများ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Prause အပါအ ၀ င်၊
ORIGINAL ဝေဖန်မှုများ၏ END သည်
လေ့လာခြင်း Prause et al ။ “ မှကောက်နုတ်ထားသည်။အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို", 2015: